साताकाे नेप्से अपडेट , के के भए ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyसाताकाे नेप्से अपडेट , के के भए ?
साताकाे नेप्से अपडेट , के के भए ?
फागुन २६ गते बुधबार अघिल्लाे हप्ताकाे अन्तिम काराेबार दिन थियाे । बिहिबार शिवरात्री र शुक्रबार शनिबार नेप्सेकाे काराेबार नहुने भएकाले चैत १ गते आइतबार काराेबार खुल्याे । बुधबार २४५८.४९ अंकमा पुगेर राेकिएकाे नेप्से आइतबार घटेर २४०७.२६ अंकमा आइपुग्याे । त्यस्तै साताकाे अन्तिम दिन हिजाे ५ गते बिहिबार नेप्से २४७५.०९ अंकमा आइपुगेकाे छ । यसरी हेर्दा सातामा नेप्से १६.६ अंकले बढेकाे छ । साेमबारसम्म घटेकाे नेप्से मंगलबारबाट उकालाे लाग्न थाल्याे ।
नेप्सेले सातामा उकालाे यात्रा गरेपनि काराेबार रकम भने सामान्य नै देखिएकाे छ। चैत १ गते आइतबार ४ अर्ब ८५ कराेड १० लाख ५४ हजार ३४ रूपैँयाकाे काराेबार भएकाेमा साेमबार ४ अर्ब ९ कराेड ४४ लाख २३ हजार ७ सय १ रूपैँयाकाे काराेबार भयाे । त्यस्तै हिजाे बिहिबार नेप्सेमा ४ अर्ब ५८ कराेड ६६ लाख ५० हजार ९५८ रूपैँयाकाे काराेबार भयाे । यसरी हेर्दा काराेबार रकममा कमि आएकाे देखिन्छ ।
याे साता चन्द्रागिरी हिल्सकाे शेयर मूल्यले लगातार सकारात्मक सर्किटकाे लेबल छाेइरह्याे । आइतबार ८८४ रूपैँया प्रतिकित्तामा काराेबार खुलेकाे चन्द्रागिरी हिल्सकाे शेयर मूल्य हिजाे बिहिबार १२९२ रूपैँया प्रतिकित्ता पुगेकाे छ ।
त्यस्तै याे हप्ता अत्यधिक चर्चा कमाएकाे नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंककाे शेयर मूल्य प्रभावित पार्ने गरी आएकाे समाचारले बजारमा केही प्रभाव पारेपनि कम्पनीकाे शेयर मूल्यमा भने प्रभाव पार्न सकेकाे देखिँदैन । इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंककाे शेयर मूल्य आइतबार ५२३ रूपैँया प्रतिकित्तामा सुरू भएकाे थियाे भने साताकाे अन्तिम दिन यसकाे मूल्य ५२५ रूपैँया प्रतिकित्ता पुगेकाे छ । लण्डन स्टक एक्सचेन्जमा ३० मिलियन बराबरकाे बण्ड जारी गर्ने समाचार आएसँगै बैंकसँग नेप्सेले स्पष्टिकरण माग गरेकाे छ।
साताकाे अन्तिम दिन नेपाल बंगलादेश बैंक र नबिल बैंकबीच मर्ज हुने भन्दै समाचार आएपछि नेपाल बंगलादेश बैंककाे शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेकाे थियाे । नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच मर्ज नहुने भएपछि अब आगामी हप्ता यसकाे प्रभाव हेर्न बाँकी छ ।
याे हप्ताबाट काराेबार सुरू गरेका दुइ कम्पनीमध्ये ग्रीनलाइफ हाइड्राेपावरकाे मूल्य सर्किटकै लेबलमा अघि बढेकाे छ । मंगलबारबाट काराेबार सुरू भएकाे ग्रीनलाइफकाे शेयर मूल्य २९९ बाट बढेर साताकाे अन्तिम दिन ३९६ पुगेकाे छ । त्यस्तै मंगलबारबाट नै काराेबार सुरू भएकाे महिला लघुवित्तकाे शेयर मूल्य ४३८ बाट ४४६ पुगेर राेकिएकाे छ । यसकाे बिहिबार कुनै मूल्य हेरफेर भएन ।
नेप्से उतारचढाव आएकाे याे हप्ता जलविद्युत समूहकाे शेयर भने उकालाे लागेकाे छ। केही कम्पनीहरूकाे मूल्यमा लगातार सर्किट लाग्याे भने केही कम्पनीहरूकाे मूल्य लगातार उकालाे लागिरह्याे । अपर तामाकाेशी , घलेम्दी हाइड्राेपावर र जाेशी हाइड्राेकाे मूल्यमा उतारचढाव देखियाे ।
साताकाे एकदिन हाेटल समूहमा पनि चमक आएकाे थियाे ।
समग्रमा याे हप्ता पहिलाे दुइ दिन नेप्से ओरालाे लागेपनि पछिल्लाे ३ दिन भने नेप्सेले गति लिएकाे छ। काराेबार रकम सुस्त भएपनि लगानीकर्ताहरूमा आकर्षण भने झनै बढेकाे देखिएकाे छ।
Previous articleस्वास्थ्य चाैकीकाे पर्खाल मापदण्ड नपुगेकाे भन्दै भत्काइयाे
Next articleभारतद्वारा इंग्ल्यान्डविरुद्धको एकदिवसीय सिरिजका लागि टिम घोषणा